शरीरको वजन घट्दा कम भएको बोसो आखिर जान्छ कहाँ ? — Paschimnews.com News From Nepal
आज : २०७६ जेठ ९ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
शरीरको वजन घट्दा कम भएको बोसो आखिर जान्छ कहाँ ?
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/६/८ गते
स्कुलमा भौतिक र रसायन विज्ञानका शिक्षकले ‘उर्जा कहिले पनि नष्ट हुँदैन खाली एक रुपबाट अर्को रुपमा बदलिन्छ’ भनेर पढाउँछन् ।
त्यसो भए तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ कि हाम्रो शरीरको वजन घट्दा शरीरको बोसो कहाँ जान्छ ? वजन घटाउने बारेमा धेरै मानिसहरु सोच्छन् । केहीले मिहिनेत गरेर साँच्चैनै बोसो घटाउँछन् पनि ।
तर त्यो शरीरबाट घटेको बोसोको के हुन्छ ? यो एक ठूलो प्रश्न हो । र यसको उत्तर निक्कै कम मानिसलाई मात्र थाहा छ । यहाँ सम्मकि स्वास्थकै क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु समेत यसबारे अनविज्ञ रहेका हुन्छ ।
यो कुरा अष्ट्रेलियामा गरिएको एक सानो सर्वेक्षणको क्रममा थाहा पाइएको हो । स्वास्थ्य दुनियाँमा दख्खल राख्ने करिब १५० भन्दा बढी मानिसहरुलाई यो प्रश्न सोधिएको यियो ।
अष्ट्रेलियामा सिड्नीमा रहेको युनिभर्सिटी अफ साउथ वेल्सका प्रध्यापक एण्ड्रयू ब्राउन र अनुसन्धानदाता रुबेन मिरमान पनि ती मानिसहरु मध्ये हुन्, जसलाई शरीरको बोसो आखिर कहाँ जान्छ भनेर सोधिएको थियो । यो प्रश्नको धेरै खालका जवाफ आयो ।
त्यीनमध्ये ९८ ५ जवाफ गलत थियो । त्यीनमध्ये केही निक्कै रमाइला थिए भने केही निक्कै अचम्म खालका । धेरैजसोले हामीले घटाउने बोसो उर्जामा बदलिने बताएका छन् । तर यस्तो हुन सम्भव थिएन, किनकि यसबाट पदार्थको संरक्षणको नियम उल्लघंन हुन्थ्यो ।
त्यसो भए खासमा के हुन्छ त ?
केही मानिसहरुले बोसो मांसपेशी बदलिने बताए । यो पनि सम्भव छैन । उता केही मनिसहरुले शरीरबाट घटेको बोसो दिसाको रुपमा हाम्रो शरीरबाट बाहिर जाने बताएका छन् । पाचन क्रिया र वजन घटाउने बारेमा पहिले देखिनै धेरै भ्रम रहेको छ ।
त्यस्तै भ्रम घटाइएको बोसो कहाँ जान्छ भन्नेमा पनि रहेको छ । यसको जवाफ दिएका छन् प्रथ्यापक एण्ड्रयू ब्राउन र अनुसन्धानकर्ता रुबेन मीरमानले । ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा उनीहरुले यस प्रश्नको जबाफ समेटेर आलेखनै प्रकाशित गरेका छन् । यहाँ उनीहरुको जवाफलाई संक्षिप्त पारेर दिइएको छ ।
खासमा बोसो कार्बनडाइअक्साइड र पानीमा बदलिन्छ । कार्बनडाईअक्साईड हामी सास छोड्दा शरीरबाट बाहिर निकाल्छौं । जहाँ पानीको कुरा छ यो विभिन्न शारिरिक क्रियाहरुबाट हुदैं अन्तमा पिसाबको रुपमा बाहिर जान्छ ।
हामीले जति जे खान्छौं त्यो कार्बनडाइअक्साइडको रुपमा हाम्रो फोक्सोबाट बाहिर फालिन्छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार हामीले खाने जुनसुकै कार्बोहाइड्रेट र बोसो कार्बनडाईअक्साइड र पानीमा विखण्डन हुन्छ । साथमा अल्कोहलमा पनि बदलिन्छ ।
यही प्रक्रिया प्रोटिनमा पनि हुन्छ । हुनत केही कुरा यूरिया र अन्य ठोसको रुपमा पनि बदलिन्छ र पछि दिसाको रुपमा, पसिनाको रुपमा या यूरियाको रुपमा शरीरबाट बाहिर निक्लन्छ ।
अन्तमा फाइबरमात्र पेटसम्म पुग्छ र त्यो पाचन प्रक्रियामा बाँचेको अवशेष दिसाको रुपमा बाहिर आउँछ । स्वासमार्फत बोसो निक्लने भए केहीलाई लाग्लाकि हामीले छिटो–छिटो सास फेर्दा पनि बोसो घट्छकि भनेर ?
तर त्यस्तो हुँदैन । प्रध्यापक एण्ड्रयू ब्राउन र अनुसन्धानदाता रुबेन मीरमान यस्तो गर्नु खतरनाक भएको बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार यस्तो कार्यले व्यक्तिलाई चक्कर आउनसक्छ र व्यक्ति बेहोश समेत हुनसक्छ ।
बजन घटाउने सबैभन्दा स्वस्थ तरिका भनेको खानामा क्यालोरीको मात्रा घटाउने र शारीरिक गतिविधि बढाउने हो ।
सेक्स गर्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ?
पायल्स भए यसो गर्ने
यी हुन् एमआरआई गर्दा ध्यान दिनैपर्ने कुरा
जान्नुहोस् हाँस्नुका फाइदा
सेक्स गर्दा स्तन मिच्ने कि नमिच्ने ? यस्तो छ अध्ययनको निष्कर्ष
राजमार्गमा टिपर आतंकः ट्राफिक प्रहरी मौन
गत शुक्रबार दिउँसो कोहलपुर कुसुम सडक खण्डको राप्तीसोनारी गाउँपालिका ८ शम्शेरगन्ज नजिकै टिपरले कारलाई ठक्कर...
बैशाख १९, २०७६
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका कर्मचारी मृत फेला, हत्या गरिएको आशंका
बाँकेको नेपालगन्जमा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई...
बैशाख २७, २०७६
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका २ विद्यार्थी लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित पक्राउ
बाँकेमा एमबीबीएसका २ विद्यार्थी लागुऔषध ब्राउनसुगरसहित पक्राउ परेका छन् । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल...
बैशाख २४, २०७६
नेपालगन्जकी १३ वर्षीय बालिका असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा मृत्युको मुखमा
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० निवासी १३ वर्षिया एक बालिका यौन शोषणमा परेकीछन् । यौन...
सुनिताको सिउँदोमा सिन्दूर हाल्न नपाई ट्रकले लुट्यो तीन वर्षको प्रेम
कैलालीको लम्कीका भीमराज भण्डारी र सुनिता रावलले बिहे गरेको आउने असारमा तीन वर्ष पुग्दैछ ।...
बैशाख १८, २०७६
स्वस्तिका लिम्बु मृत्यू प्रकरणः न्याय माग्दै बाँकेको राँझामा प्रर्दशन
स्वस्तिका लिम्बुको हत्यामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै बुधबार पनि प्रर्दशन गरिएको छ ।...
बाँकेको कुसुममा भयानक सवारी दुर्घटनाः १ को मृत्यू, ३ गम्भिर घाइते
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका १ मा आइतबार साँझ सवारी दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यू भएको छ...